Shiinaha Shiinaha Bilowga Motors Mitsubishi-M009T83279 ee Soosaarka iyo Warshadaha Baabuurta waaweyn | Niitay
Matoorro bile ah oo tayo sare leh DELCO-19011512
DELCO-19011507 ee loogu talagalay gawaarida xamuulka iyo dhismaha ...
Gawaarida bilowga ah ee DELCO-19011505 BOSCH MITSUBISHI PR ...
DELCO-1113288 oo loogu talagalay gawaarida waaweyn & Mashiinka Dhismaha ...
Matoorrada waxqabadka wanaagsan ee DELCO-1113286
tayo sare leh DIXI-5268413-1
Shiinaha tayo sare leh matoorro cusub oo bilaa bilow ah Prestoli ...
Prestolite-M105R3003SE oo loogu talagalay gawaarida waaweyn & dhismaha ...
Gawaarida Gawaarida Xamuulka ee China Starter Motors Mitsubishi-M009T83279
19910260, 51262017235, M009T83279, M9T83279
M009T83279 Danab (V) 24
Sanka Sanka Maya
Nooca Kordhinta Flange
Godadka sii kordhaya 3
Naqshadeynta Bilowga PLGR
Hore: Mitsubishi-M009T83071 Motors Bilowga
Xiga: Soosaaraha Warshadda Shiinaha Mitsubishi-M009T83771 matoorrada Bilowga ah
Bilowga leh hoos u dhigga qalabka wax lagu xiro oo lagu rakibay inta udhaxeysa cirifka mashiinka bilowga iyo qalabka gawaarida ayaa loo yaqaan 'Startter Startter'. Awooda mashiinka taxanaha xiisaha leh ee DC wuxuu si toos ah ugu dhigmaa tiradeeda iyo xawaareheeda. Waa la arki karaa marka xawaaraha mootada la kordhiyo iyadoo hoos loo dhigayo culeyskeeda, awoodda bilowga ayaa joogto lagu ahaan karaa. Sidaa darteed, marka xawaare sare, taxaddar-hooseeya ah DC Qalabka korontada sida bilowga ah wuxuu si weyn u yareyn karaa mugga iyo culeyska bilowga isla awooddaas. Si kastaba ha noqotee, miisaanka bilowga ayaa aad u hooseeya si loo buuxiyo shuruudaha lagu bilaabayo mashiinka. Sababtaas awgeed, marka xawaare sare, mishiin yar oo mashiinka DC-ga ah loo adeegsado bilowga, aaladda dib-u-dhiciyaha ayaa lagu rakibay inta udhaxeysa mootada iyo qalabka gawaadhida, taas oo yareyn karta xawaaraha mootada iyadoo sii kordhineysa miiqdeeda waxay yareyn kartaa xawaaraha mootada iyadoo sii kordhineysa miiqdeeda.
Marka la eego tayada, waxaan si adag u xakameynaa xulashada alaabta ceyriinka ah, waxaan hirgalineynaa dhammaan kormeerka markii aan soo geleyno warshadda, iyo habka wax soo saarku wuxuu si adag u raacayaa heerarka tayada / ISO / TS 9000 iyo ISO / TS 16949. Shirkadduna waxay soo bandhigaysaa qalabka baaritaanka ee loo yaqaan 'DV DV' ee la soo dhoofiyo si ay si guud u tijaabiso 100% tijaabinta si adag oo waafaqsan heerarka warshadaha si loo hubiyo in badeecad kasta ay la kulanto heerarka gudaha iyo heerarka tayada u dhigma ee Yurub, si macaamiisha ay ugu isticmaali karaan alaabada si kalsooni leh.
Hadafka shirkadda NITEL: Ku qanacsanaanta macaamiisha ayaa ah hadafkeenna, waxaanan si daacadnimo leh u rajeynaynaa in la dhiso xiriir muddo dheer leh oo iskaashi lala yeesho macaamiisha si wadajir ah loo horumariyo suuqa. Dhisid qurux badan berrito wadajir! Shirkadeena waxay tixgalineysaa "qiima macquul ah, waqti wax soo saar hufan iyo adeeg wanaagsan iibka kadib" mabaadi'deena. Waxaan rajeyneynaa inaan lashaqeyno macaamiil badan horumarin iyo waxtar labada dhinac ah. Waxaan soo dhaweyneynaa iibsadayaasha suurtagalka ah inay nala soo xiriiraan.
Dhibaatooyinka ugu badan ee u dhexeeya alaab-qeybiyeyaasha iyo macaamiisha waxaa sabab u ah wada-xiriirka liita. Dhaqan ahaan, alaab-qeybiyeyaasha way diidi karaan inay wax ka weydiiyaan waxyaabaha aysan fahmin. Waxaan u jajabineynaa caqabadahaas si aan u hubinno inaad u hesho waxa aad rabto heerka aad filayso, markaad rabto. Waqtiga bixinta ugu dhakhsaha badan iyo badeecada aad rabto waa Habkayaga.
Mashiinka matoorrada Shiinaha ee Mitsubishi-M009T68871
Mitsubishi-M009T83071 Motors Bilowga
Mitsubishi-M009T70279 matoorrada bilowga ah ee culus ...
Mitsubishi-M009T83879 Motors Startter Tayo Wanaagsan
Shiinaha tayo sare leh brand matoorrada Starter cusub Mit ...
Matoorro bile ah oo tayo sare leh Mitsubishi-M008T87171
Cinwaanka: No.32 Huanhe wadada, aagga High-Tech, magaalada Liaocheng, gobolka Shandong, Shiinaha
isniinta-jimco: 8 subaxnimo - 6galabnimo